युरोपियन लिगमा सर्वाधिक सफल तीन खेलाडिहरुको साझेदारी | Hamro Khelkud
युरोपियन लिगमा सर्वाधिक सफल तीन खेलाडिहरुको साझेदारी
पेरिस (एजेन्सी)– युरोपियन फुटबलमा यो सिजन धेरै अविश्वसनिय प्रदर्शन भएका छन् । कतिपयले फुटबलका यी तथ्याङ्कलाई अनुमान समेत गरेका थिएनन् । सिजनको मध्यतिर आइपुग्दा केहि क्लबमा उत्कृष्ट साझेदारी देखिएको छ । खास गरि अग्रपंक्तिमा तीन जना खेलाडि रहेको टोली झनै सफल देखिएका छन् । यहाँ युरोपियन लिगका शीर्ष ५ साझेदारी यस्तो छ :
१. काभानी, नेयमार, बाप्पे (पिएसजी)– ३८ गोल
एमसिएन सम्मिलित पिएजसी अहिले युरोपको उत्कृष्ट साझेदारी भएको टोलीका रुपमा परिचित बन्दै आएको छ । लिग वानमा यी ३ जनाले मिलेर ३८ गोल गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये इडिन्सन काभानीले मात्र १९ गोल गरेका छन् । नेयमार र बाप्पेले काभानीलाई गोल गर्न निकै सघाइरहेका छन् । नेयमार बार्सिलोनाबाट र गत सिजन मोनाकोमा उच्च प्रदर्शन गरेका केलियन बाप्पे लोनमा गएपछि पिएसजी निकै बलियो रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ।
२. स्ट्रेलिङ, अगुएरो, गाब्रियल जेसस (म्यानचेस्टर सिटी)–३५ गोल
म्यानचेस्टर सिटीले प्रिमियर लिगमा यो सिजन २२ खेलमा ६४ गोल गरिसकेको छ । त्यसमध्ये स्ट्रेलिङ, अगुएरो, गाब्रियल जेससले ३५ गोलको साझेदारी गरेका छन् । जसका कारण पेप ग्वार्डिओलाको सिटीले प्रिमियर लिगमा १५ अंकको अग्रता लिएको छ । ३ खेलाडी मध्ये २३ वर्षे रहिम स्ट्रेलिङले १४ गोल गरिसकेका छन् भने अगुएरोको १३ र जेससको नाममा ८ गोल रहेको छ ।
३.सालाह, फिर्मिनो, कौटिन्हो (लिभरपुल)–३३ गोल
योर्गन क्लोपको टोलीले पनि प्रिमियर लिगमा ५० गोल गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ३३ गोल सालाह, फिर्मिनो, कौटिन्होले गरेका छन् । तर, अब यो साझेदारी टुट्ने भएपछि त्यसको असर लिभरपुललाई कति पर्नेछ त्यो समयले बताउने छ । कौटिन्हो लिभरपुल छाडेर बार्सिलोना आबद्ध हुने क्रममा छन् । चोटका कारण ढिला गरि सिजनको सुरुआत गरेका कौटिन्होले ७ गोल गरेका थिए भने फिर्मिनोले ९ गोल गरेका थिए । टोलीका नयाँ खेलाडी सालाहले भने १७ गोल गरेका छन् ।
४. मेस्सी, स्वारेज, पौलिन्हो (बार्सिलोना)–३१ गोल
लियोनल मेसी यो सिजनको उत्कृष्ट खेलाडी मध्येका एक हुन् । सुरुआती ४ खेलमा दुई ह्याट्रिक गर्न सफल मेस्सी १५ गोलसहित ला लिगामा अहिले शीर्षस्थानमा छन् । त्यस्तै लुइस स्वारेजले पनि १० गोल गरिसकेका छन् । टोलीका नयाँ खेलाडी पौलिन्होले मेस्सी र स्वारेजसँगको साझेदारीमा ६ गोल गरिसकेका छन् ।
५. केन, सन, डेले अल्ली (टोटेनह्याम)- ३० गोल
यो सिजन ह्यारी केन उच्च फर्ममा रहेका छन् । इङ्ल्यान्ड टोलीका फरवार्ड केनले प्रिमियर लिगमा यो सिजन २० खेलमा १८ गोल गरिसकेका छन् । जसमध्ये पछिल्ला ४ खेलमा उनले २ ह्याट्रिक गरेका थिए । सन् २०१७ मा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोन मेस्सीलाई पछि पछि पार्दै केनले सर्वाधिक गोल गरेका थिए । सनले पनि यो सिजन ७ गोल गरिसकेका छन् । राम्रो साझेदरी गरिरहेका अल्लीले पनि ५ गोल गरेका छन् ।